Ahoana ny fomba hamonoana ny fomba azo antoka amin'ny Tumblr? - Ahoana No
Tumblr dia sehatra iray tsara indrindra hizaran'ny mpampiasa ny fiainany andavanandro. Sehatra microblogging ity izay mbola malaza amin'ny mpijery akany. Betsaka ny olona miroso mankany amin'ny serivisy hafa toa ny Facebook sy Instagram. Ny estetika Tumblr dia mijanona ho fehezanteny mahazatra eo amin'ny fiainantsika. Io no sehatra mora azo ampiasaina amin'ny Internet. Afaka mifandray amin'ny mpihaino marobe ianao.
Androany isika dia hijery toe-javatra Tumblr vitsivitsy. Ny fiasa maody azo antoka dia mety hanelingelina ny mpamaky maro. Amin'ity toro-lalana ity dia ho hitantsika ny lalana hamonoana azy.
Inona ny maody azo antoka an'i Tumblr?
Safe mode dia singa iray tao anatin'ny Tumblr hisorohana ny mpampiasa tsy hahita NSFW na bilaogy mahery setra. Mpampiasa maro no saro-pady ary te hisoroka ny atiny toy izany. Ny fomba azo antoka dia manampy amin'ny fampihenana ny habetsaky ny paositra. Misy mpampiasa an-tapitrisany eo amin'ny lampihazo. Mety ho sarotra be ny manara-maso ny atiny apetraky ny mpanatrika. Ny rafitra fanaraha-maso ny paositra mandeha ho azy dia manamaivana ny lahasa. Tumblr izao dia mandray fomba hafa amin'ny sehatra misy azy. Tanjon'izy ireo ny hahatonga ny fampiharana sy tranokala hifankatia kokoa amin'ny fianakaviana. Ny atiny NSFW rehetra sy mora tohina dia tsy hita matetika ao amin'ilay tranonkala. Ny fisehoana maody azo antoka dia teo mba hamelana anao hifindra, saingy tsy misy intsony io.
Azo atao ve ny mamono ny Safe Mode amin'ny Tumblr?
Ny maody azo antoka dia tsy fitaovana mifameno intsony amin'ny Tumblr Platform. Ireo mpampiasa dia tsy afaka mamela na mampandeha ny serivisy.
Nesorina tsy ho ela tao amin'ny tranokala sy ny rindranasa. Ny fanovana ny politika tato ho ato dia natao manoloana ny doka. Mikasa ny hanao doka amin'ny sehatra ireo mpandraharaha. Ny fomba tokana azo antoka anaovana izany dia amin'ny alàlan'ny atiny azo antoka. Tsy azo atao izao anefa ny mamono ny fomba azo antoka amin'ny fampiharana Tumblr anao. Manomboka mametraka sakana amin'ny karazana atiny tsy mendrika rehetra eo amin'ny lampihazo izy ireo.
Fomba famafana ny maody azo antoka amin'ny Tumblr:
Mora ihany ny dingan'ny famonoana ny fomba azo antoka. Afaka manao an'izany ny rehetra amin'ny alàlan'ity toro-lalana ity. Azonao atao ny manaraka ny dingana etsy ambany ary mankafy atiny rehetra. Ireto ny dingana tokony harahinao.
Tumblr dia sehatra tsara indrindra hijerena bilaogy samihafa.Io no tranon'ny atiny feno alahelo.Azonao atao ny mitsidika ity rohy manaraka ity - https://www.tumblr.com/ . Hahatonga anao any amin'ny pejy fandraisana amin'ny tranokala izany.
Ireo mpampiasa dia mila miditra amin'ny kaonty Tumblr misy azy eo amin'ilay tranonkala. Azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny kaonty mailakao sy ny teny miafinao. Ny tranokala koa dia ahafahan'ny mpampiasa miditra haingana amin'ny fampiasana rohy mazika. Azonao atao ny mangataka amin'ilay tranokala handefa ity rohy ity amin'ny adiresy mailakao.
Raha vantany vao miditra ianao, dia mora ny manomboka mijery ny dashboard anao. Mampiseho ny atiny rehetra arosonao ny tranonkala. Ny tsara indrindra dia ny mitady ny atiny vaovao amin'ny fanarahana anao. Azonao atao ny mitsidika ireo pejy natokana ho an'ny fitaovana mora tohina.
Ny feed explore dia tsara ihany koa hahitanao pejy NSFW na Sensitive vaovao. Hisy lahatsoratra vao tsy ela izay hita ao amin'ity fizarana ity. Afaka mahita fampitandremana amin'ireo lahatsoratra saro-pady ianao. Tsindrio ilay fampandrenesana dia jereo ihany.
Ahoana ny fomba hijerena ireo lahatsoratra Tumblr tsy misy kaonty?
Tumblr dia sehatra lehibe mitaky anao hidira amin'ny kaonty. Betsaka ny olona mankafy mijery ireo lahatsoratra ireo. Azonao atao izao ny mijery azy ireo nefa tsy misoratra anarana koa. Hitanay ny fanamboarana mora izay mifanentana amin'ny filanao. Manampy anao hizaha atiny tsy azo antoka ihany koa. Ireto ny dingana hampiasana ny tranokala Tumbex ho an'ny zavatra ilainao.
Ireo mpampiasa dia tokony hanomboka amin'ny fitsidihana ny tranokala Tumbex. Io dia fitambaran'ireo lahatsoratra rehetra avy ao amin'ny Tumblr. Azonao atao ny manindry ity rohy ity - https://www.tumbex.com/ . Ny pejy fandraisana dia manana ny fifandraisana ilaina rehetra hahalalanao bilaogy vaovao.
Azonao atao ny mitady ny atiny rehetra ao amin'ilay tranonkala amin'ny alàlan'ny fampidirana lahatsoratra tsotra. Hanamarina ny tahiry Tumblr izany ary hanome valiny anao.Bilaogy maro no tsy mandeha ankehitriny. Tumblr dia mamafa tsy tapaka ireo pejy izay mampiseho atiny tsy misy dikany.
Misy vintana lehibe tsy hahitanao ny atiny NSFW miaraka amin'ny Tumbex koa. Ireo mpampiasa dia afaka manafoana ny fisavana fikarohana azo antoka amin'ny valiny tsara indrindra.
Tokony ho fampahalalana antonony Tumblr:
Tumblr dia fitaovana tena tsara ahafahan'ny mpampiasa mandefa sy mijery bilaogy manaitaitra mora foana. Nahita fahombiazana voalohany ny sehatra noho ny atiny feno alahelo. Afaka nizara fomba fijery sy tantara samihafa ny tanora. Mampalahelo fa efa tapitra ny fotoana hanaovana izany, ary manomboka manova zavatra i Tumblr. Mihamiorina kokoa ny sehatra. Manala pejy avy amin'ireo mpamorona Youtube sy Facebook izy ireo. Amin'ny maha-mpampiasa ny forum ahy dia miteny aho fa ilaina ny manafoana ny atin'ny polarisma. Tsy eo ambony latabatra intsony anefa ny vazivazy mahatsikaiky sy ny votoaty mahatsikaiky. Tumblr no toerana farany nahafahanao nanao an'izany.
Tumblr dia sehatra tena tsara misy zavatra maro atolotra ny mpampiasa. Manoro hevitra anao izahay mba hanandramanao ny serivisy mba hahitana valiny tsara indrindra. Amin'ity toro-lalana ity dia manandrana mamaly ny fisalasalanao rehetra momba ny olana amin'ny fomba azo antoka izahay.
Ahoana ny fomba ahazoana fitsapana maimaim-poana Crunchyroll?
Ahoana ny fomba hamerenana ny kaonty roblox najanona
sarimihetsika maimaim-poana azo antoka amin'ny Internet tsy misy fisintomana
ny fomba hijerena horonantsary voasakana ao amin'ny firenenao amin'ny youtube
kissanime tsy afaka nampidirina ilay horonantsary
aiza no ahitako sarimihetsika